မှားလွန်းနေတဲ့ မဲစာရင်း ကိစ္စ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် စုံစမ်းသင့်
NLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေလ ၁၆ ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှာ တွေ့ရစဉ်
လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲစာရင်းတွေ ကြေညာရာမှာ အမှားအယွင်းတွေ များလွန်းနေတာဟာ စဉ်းစားစရာဖြစ်နေကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ စုံစမ်းသင့်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ ဥက္ကဌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
"အမှားတွေကတော့ သိပ်များတာပဲ အဲ့အတွက်တော့စဉ်းစားရမှာပေါ့၊ ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှ အမှားတွေ များလဲပေါ့နော်၊ ၂ဝ၁ဝ တုန်းကလည်း ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ ၂ဝ၁၂ တုန်းကလည်း ဒီလောက်မှားတာတွေ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ အခုမှဘာလို့ ဒီလောက်တောင်မှ မှားနေတာလဲ၊ တချို့နေရာတွေမှာ မဲစာရင်းတွေက ၂ ခုဖြစ်တာတို့၊ အဲ့ဒါတွေကလည်း အဓိပ္ပာယ်တော့သိပ်မရှိဘူး၊ ဒါတွေကတော့ ကော်မရှင်အနေနဲ့ စုံစမ်းသင့်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ"
ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်အတွက် RFA က မနေ့က မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ဖြေကြား ခဲ့တာပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘာသာလူမျိုးပဋိပက္ခ ပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပဋိပက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေ ကနေပြီးတော့ ထွက်ပေါ်လာတာ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရပ်တည်ရေးအတွက်၊ ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာလုံလောက်ရေးအတွက်၊ ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေး အတွက် ဒါနှစ်ဘက်က်စလုံးမှာ ဒီလိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်ဘက်စလုံး ဖက်ကနေကြည့်ရမယ်၊ တစ်ဘက် ကိုပဲဖိပြီးတော့ အပြစ်ဆိုလို့မရဘူးပေါ့နော်၊ မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကလည်း တကယ့်ကိုအမှန်ဒုက္ခတွေပဲ၊ ရခိုင်တွေရဲ့ ဒုက္ခတွေကလည်း တကယ့်ကို အမှန်ဒုက္ခတွေပဲ၊ အဲ့ဒီတော့ အဲ့ဒီဟာ နှစ်ဘက်စလုံးဖက်ကို ကြည့်ရ မယ်လို့ပြောတာကို ဘယ်သူကမှစိတ်မဝင်စားဘူး၊ ဘယ်သူကမှလည်း မကျေနပ်ဘူးပေါ့နော်၊ တစ်ဘက်ကဆိုရင် ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကိုပဲ အပြစ်ဖို့ချင်နေတယ်၊ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှုတွေရှိနေတယ်၊ စိုးရိမ်ကြောင့် ကျစရာကိစ္စတွေကလည်း တကယ်ကိုအမှန်ရှိနေတယ်ဆိုတာကို အစ်မတို့သိတာကြာလှပြီ၊ ဒီဟာတွေကိုလည်း ထပ်တလဲလဲ ပြောနေတာကြာလှပြီ၊ အခုမှမဟုတ်ဘူး ဒီကစ္စတွေကို အစ်မတို့တတ်နိုင်သမျှ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းတွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူကမှ စိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး"
ဦးခင်မောင်စိုး တင်ဆက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာ အဖြေရှာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကိစ္စတွေကို နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
“ဝ” ဒေသ မြို့နယ် လေးခုမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်း UWSA ပြော
အရပ္သား အတုအေယာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစိုးရ
နေရပ်- ဖြတ္ေနျပည္ေတာ္
လက်နက်အားကိုး အနိုင့်ကျင့်တဲ့ အာဏာရှင်စနစ် မှာ အရပ်သား အတုအယောင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစိုးရ
.အဖွဲ.အစည်းက ၂၀၁၅ ရှုံးရင် အာဏာစွန်.မယ်ဆိုတာ ချင်.ယုံကြပါ ။
ဖွတ်ပါတီ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် တို့ ပူးပေါင်း ပြီးမသမာသောနည်းမျိုးစုံကိုံသုံး နေ ပါတယ်။
သူတို.က ဆိုင်းဝိုင်းကြီးတီးခွင်.မရရင် ပတ်မကြီးထိုးဖေါက်ယုံတင်မကဘူး ၊ ဇါတ်ရုံကြီးတစ်ခုလုံး
မီးလောင်တိုက်သွင်းပစ်မှာ ။ ပြည်သူတွေ ၊ ပြည်သူ.ပါတီတွေ သတိထားသင်.ပြီ ။
Jul 03, 2015 11:00 PM
အဲဒီလို ဘက်မျိုးစုံ က တိုက်ခိုက် လို့ ရအောင် အစညတ်း က ဌာန ဆိုင်ရာ အသီးသီး မှာ တပ်ကလူတွေ ထည့်ထားတာ။ အမှန်အကန် ဖြစ်ဖို့ အဲဒီ နှစ်သီးစား တွေ အရင် ဖယ်ထုတ်မှ ရမယ်။
Jul 03, 2015 08:14 PM
With regards to the Votes, Events have well witnessed that will be no "free & fair election". Sinister moves are in progress. The Rekhine violence was created by internal power mastermind by foreign power fulfilling their evil aims.
Jul 03, 2015 08:29 AM
အဲဒီလို အဖက်ဖက် က တိုက်ခိုက်နိုင်ဘို့အတွက် ဌာန အသီးသီးမှာ တပ် ကလူတွေ ထိုးထားတာ။ တိုင်းပြည်အတွက် မဟုတ်ဘူး။
Jul 03, 2015 01:48 AM
ဟားဟား ကြိုတင်မဲ နဲ့ မလိမ်ရတော့ မဲစာရင်း အမှားနဲ့လိမ်တာပေါ့။ ရွေးကော်ပွဲ ကော်မရှင် က မသိချင်ယောင် ဆောင် မဆိုင် သလို လုပ်နေတာပေါ့။
Jul 02, 2015 08:10 PM